En vente actuellement 31/10/2018
Tongolo gasy + tantely : 7 andro dia mihena
Marobe ny tombon-tsoa entin’ny tongolo gasy amin’ny vatana. Mpanadio tena matanjaka ny vatana, amin’ny pozina sy ny loto izy io, hany ka tena mety raha ampiasaina hanariana ny lanja mihoatra.
1. Namoaka vokatra vaovao ilay trano mpamokatra « Chanel ».
Amin’ny maha masoivoho an’ity marika lehibe ity azy dia i Lily Rose Depp no nampiseho izany vokatra izany. Toa kanto mihitsy ny fomba hitondrany izany. Karazana lokomena sy manjamaso moa ireto vokatra vao nivoaka ireto.
Mofomamy amin’ny voankazo mena nasiana “fromage blanc”
Akora ilaina · Biscotte 225g · Noisette efa voatoto 125ml · Tantely 4sf · Dibera 2sf
Menaka « sésame » : Azo handrahoina sakafo, … mahasalama
Vokatra iray, tsy ampoizina, tsy mahazatra kanefa manova tanteraka ny nahandro atao ao an-dakozia ny « huile de sésame ».
Mikolo vodi-tongotra amin’ny karibônetra …
Rehefa ririnina no vakivaky ny vodin-tongotra, fa rehefa mafana toy izao indray ny andro dia maina sy somary miofaka izy ireny.
Lehilahy nalain’ny rainy an-keriny, 31 taona taty aoriana vao hitan’ny reniny !
Renim-pianakaviana Kanadianina iray no tafahaona tamin’ny zanany lahy indray, 31 taona taorian’ny nangalan’ny rainy an-keriny azy.
Ankizy vavy kely 9 taona afaka tamin’ny homamiadan’ny atidoha nahazo azy
Nandritra ny 2 taona i Aniya Ardon, ankizy vavy kely vao 9 taona no niady tamin’ny homamiadan’ny ati-doha tao amin’ny hopitaly Morgan Stanley ao New York Etazonia.
Sambany no nisy vehivavy namono tena noho ny asa fampihorohoroana tao Tonizia
Nitrangana asa fampihorohoroana tao Tonizia ny alatsinainy 29 oktobra lasa teo. Nitondra baomba ny vehivavy iray ka nanapoaka tena teo afovoan’ny arabe tao Bourguiba, izay lalana tena be mpandeha, any an-toerana.
Zandriko 5 taona ny olona miaraka amiko.
Tsy avelan’ny ray aman-dreninay miaraka izahay satria zaza niara-notaizaina, hono, nefa tsy misy rohim-pihavanana akory. Mba mangataka torohevitra.
Ny akanjo mariazy no jeren’ny mpanotrona mpanambady voalohany eny amin-drazazavavy. Rariny loatra araka izany raha sarotiny amin’izy itony ny vehivavy hanambady.
Fomba tsotra, manamaivana ny kitapon’ny mpianatra
Mety hitarika harerahana be ho an’ny ankizy mpianatra ny filanjana kitapo mavesatra be isan’andro, na dia ilaina avokoa aza ireo fitaovana ao anatiny ao. Tsy vitan’izany koa anefa fa mety hanakorontana ny fitomboany ara-batana koa izany. Nozahanay ny fomba azo atao hanamaivanana ny kitapo entiny mianatra.
Amin’ny maha-krisitianina ny ankamaroantsika dia betsaka tokoa ireo manankina tanteraka ny fiainany eo ambaniny fiahian’ilay Nahary.
Arafesina ny lapoaly … asio ovy !
Ny ranona ovy dia anisan’ny akora azo ampiasaina, mba hanalana ny arafesina amin’ny fitaovana ao an-dakozia toy ny lapoaly. Raha vao manomboka arafesina ny lapoaly dia toy izao no hikarakarana azy :